return of Isa Al Masih Archives - Injiilka oo ku qoran af-soomaali
Tag: return of Isa Al Masih
Muxuu geed berde ahi kala yahay yahay xiddigaha? Labaduba waa calaamado imaatinka dhacdooyinka waawayn waxaana loo siiyay digniin kuwa aan diyaarsanayn. Suuradda At-Tin waxay ku bilaabataa:
Waxaan ku dhaartay berde iyo saytuun
Suuradda At-Tin 95: 1
Miyaannaan kor yeelin magacaaga (xusiddaada). ( 5 ) Cidhiidhina waxaa ku dhaw fudayd (faraj).
Suuradda At-Tin 95: 4-5
Suuradda al-Mursalat (Ergooyinka), Suuradda at-Takwir (buuxdhaaf), iyo suurat al-infitar (Jeexitaanka) waxay si isdaba joog ah u sheegaysaa in xiddiguhu daciifin doonaan, taasina waxay muujineysaa imaatinka wax weyn:
Markase xiddiguhu Nuurku ka tago. ( 9 ) Oo samadu Dildillaacdo. ( 10 ) Oo Buuraha la Rujiyo.
Suuradda al-Mursalat 77: 8-10
Marka qorraxda la duubo (Qiyaamada). ( 2 ) Xiddiguhuna daataan (iyagoo Madow). ( 3 ) Buurahana la kexeeyo (La rujiyo).
Suuradda at-Takwir 81: 1-3
Markay Samadu dillaacdo; Markay Xiddigaha kala firdhaan; Markay Badaha ku dhib qabaan inay qarxaan;(S)
uuradda al-Infitar 82: 1-3
Kuwani maxay ka dhigan yihiin? Nebi Isa al Masih PBUH wuxuu sharxayaa usbuuciisii ​​ugu dambeeyay. Marka hore dib u eegis deg deg ah.
Ka dib markii la soo galay Yeruusaalem Axadii Nisan 9 sida nebiyadii Daanyeel iyo Sekaryaah, ka dibna la galay Macbadka Isniinta Nisan 10 sida ku cad qawaaniinta Nebi Muuse ee Tawreed si loogu xusho wanka Ilaah Ciise Masiix waxaa diiday madaxda Yuhuudda. Xaqiiqdii, intuu nadiifinayay Macbudka ayay bilaabeen inay qorsheeyaan sida loo dili lahaa isaga. Injiilku waxaa ku qoran wixii xigay ee Ciise Masiix uu sameeyay.
Habaarka Geedka Berdaha ah
Markaasuu iyagii ka tegey (hoggaamiyayaashii Yuhuudda oo macbudka ku jiray Maalintii Isniinta ee maantii 2, Nisan 10) wuxuuna ka baxay magaaladii isagoo aaday meeshuu habeenkaa waqtiga ku qaatay..
Aroortii hore (Talaadada Nisan 11, Maalinta 3), intuu Ciise ku sii jeeday magaalada, wuu gaajooday. Oo wuxuu arkay geed berde ah oo jidka ag yaal, wuuna u fuulay, laakiinse waxba kama uu helin caleemo keliya maahee. Kolkaasuu ku yidhi, Mar dambe midho yaanaydnaan ii bixin. Markiiba geedkii waa engegay.
Matayos 21: 17-19
Kuwo badan baa la yaabay sababta uu Ciise Masiix u hadlay oo u engejiyey geedkii berdaha ahaa. Injiil si toos ah uma sharaxyo, laakiin nebiyadii hore ayaa naga caawin karay inaan fahamno. Nebiyadan, markay ka digayaan xukunka soo socda waxay inta badan adeegsan jireen muuqaalka geed berde oo engegay. U fiirso sida masaalada berdaha ah ee engegay ay nebiyadii hore ugu adeegsadeen digniintooda:
Canabkii wuu engegay, oo berdihiina wuu dhaday, oo geedkii rummaanka, iyo geedkii timirta, iyo geedkii tufaaxa, iyo xataa dhirtii berrinka ku tiil oo dhammu way wada engegeen, oo farxaddiina way ka dhammaatay binu-aadmiga.
Yooeel 1: 12
Caamoos 4: 9
Xaggay 2: 19
Ishacyaah 34: 4
13 Rabbigu wuxuu leeyahay, Waan wada baabbi’in doonaa. Geedcanabka midho kuma oolli doonaan, oo geedberdahana midho kuma oolli doonaan, oo caleentuna way wada dhadi doontaa, oo waxyaalihii aan siiyey oo dhammu way ka wada dhammaan doonaan.
Nebi Hosheeca wuu sii dheeraaday, oo wuxuu u isticmaalay geed berde ah masaal reer binu Israa’iil ka dibna wuxuu ku dhawaaqay habaar:
10 Waxaan gartay in dadka Israa’iil ay la mid ahaayeen canab cidlada ku dhex yaal, oo waxaan arkay in awowayaashiin ahaayeen sidii berdaha xilliga hore bislaada, laakiinse iyagu waxay yimaadeen Bacal Fecoor, oo waxay gooni isugu sooceen waxaas ceebta miidhan ah, oo waxay u karaahiyoobeen sidii wixii ay jeclaayeen oo kale.
Hoosheeca 9: 10-12, 16-17; fiiro u yeelo Efrayim = Israa’iil
Inkaaradan ayaa rumoobay markii Yeruusaalem markii ugu horreysay l burburiyey 586 BCE (ka eeg Halkan taariikhda Yuhuudda). Markii Ciise Masiix uu engejiyey geed berde ah, wuxuu si maldahan u sii sheegayey burburka soo socda ee Yeruusaalem iyo musaafurinta Yuhuudda ee dalka.
Kadib Markuu geedkii berdaha ahaa habaaray, Ciise Masiixh wuxuu aaday macbudka, isagoo dadka baraya oo la doodaya hoggaamiyaasha Yuhuudda. Digniino badan ayuu ka bixiyay Xukunka Ilaah. Injilku wuxuu sheegayaa waxbaristaa waxayna ku qoron yahiin halkan.
Nebigu wuxuu saadaaliyay astaamaha soo laabashadiisa
Ciise Masiixh ayaa markaa ku soo gabagabeeyey wax sii sheegid mugdi oo ku saabsan burburka Macbadka Yuhuudda ee ku yaal Qudus. Waqtigaas, macbudkani wuxuu ka mid ahaa dhismooyinka ugu cajaa’ibka badan Boqortooyadii Roomaanka oo dhan. Laakiin Injiil wuxuu diiwaan geliyaa inuu horay u sii arkay burburkeeda. Tani waxay bilaawday dood ku saabsan ku soo noqoshadiisii ​​dhulka, iyo astaamaha soo laabashadiisa. Injil wuxuu qorayaa waxbarashadiisa
ise ayaa macbudka ka baxay, oo intuu tegayay ayaa xertiisii u timid inay tusaan dhismaha macbudka.
Matayos 24: 1-3
Nebigu wuxuu ku bilaabay saadaalinta burburka gebi ahaanba Macbadka Yuhuudda. Waxaan ka ognahay taariikhda inay tani dhacday 70 C.E. Kadibna fiidkii (i) wuxuu ka baxay Macbadka wuxuuna ku sugnaa Buur Saytuun oo ka baxsan magaalada Yeruusaalem. Tan iyo maalintii Yuhuuddu waxay bilaabatay gabbaldhaca, hadda waxay ahayd bilowgii maalintii 4-aad ee toddobaadka, Arbacada Nisan 12, markuu ka jawaabayay su’aashooda oo uu baray dhammaadka da’da iyo soo noqoshadiisa.
31 Oo wuxuu soo diri doonaa malaa’igihiisa oo wata buun weyn, oo kuwuu doortay ayay ka soo ururin doonaan afarta jahood cirka meesha ugu fog ilaa meesheeda kale.
Matayos 24: 4-31
Halkan nebi Ciise al Masih wuxuu eegay wixii ka dambeeyay burburka Macbadka. Wuxuu baray in mudada ka timaadda burburka Macbadka iyo soo noqoshadiisa lagu sifayn doono shar sii kordhaya, dhulgariir, abaaro, dagaallo, iyo cadaadis lagu hayo kuwa raacsan. Xitaa sidaas oo ay tahay, wuxuu saadaaliyay in Injiil ‘adduunka oo dhan lagu wacdiyi doono’ (aayadda 14). Sida adduunku ka bartay masiixa, waxaa sii kordhaya tirada nebiyada beenta ah iyo sheegashooyinka beenta ah ee ku saabsan isaga iyo soo laabashadiisa. Calaamadda dhabta ah ee soo noqoshadiisii ​​intii lagu jiray dagaalladii, fowdadii iyo dhibaatadii waxay noqon doontaa carqalado aan la doodin oo qorraxda, dayaxa iyo xiddigaha ah. Si uun bay u madoobaanayaan.
Waxaan arki karnaa in dagaalka, cidhiidhiga iyo dhulgariirku ay sii kordhayaan – markaa waqtiga uu ku soo noqonayo ayaa soo dhowaanaysa. Laakiin weli ma jiraan wax carqalad ah oo cirka ka jira – sidaas darteed soo laabashadiisu waxay ahayd weli. Laakiin intee in le’eg ayaan isu dhow nahay? Ciise masiix Si uu oga jawaabo su’aashan, ayaa sii waday
Matayos 24: 32-35
Xusuusnow geedka berdaha, oo ah sumcadda reer binu Israa’iil, oo uu habaaray, oo maalintii ka horeysay engejiyey? Markuu Macbudku burburay 70 CE qallalkii Israa’iil ayaa dhacay oo kumanaan sano ayuu sii joogay. Nebigu wuxuu noo sheegay inaan raadino laamo cagaaran iyo caleemo ka soo baxaya geed berde ah – ka dibna waxaan ogaan karnaa inuu waqtigu ‘dhow yahay’. 70-kii sano ee la soo dhaafey waxaan markhaati ka nahay ‘geedkan berdaha ah’ oo ka bilaabanaya cagaar iyo soo bixid caleemo markale. Tani waxay ka bilaabatay dhalashadii casriga ahayd ee reer binu Israa’iil, waxayna sii socotey sidii Yuhuuddu u bilaabeen inay ku laabtaan Israa’iil, waxay bilaabeen waraab iyo dhulbeereed markale. Haa, tani waxay kordhisay dagaallada, dhibaatada iyo dhibaatooyinka inbadan oo waqtiyadeenna ah, laakiin tani ma ahan inay naga yaabiso maadaama nebigu taas uga digay waxbarashadiisa. Siyaabo badan, weli waxaa jira dhimasho ‘geedkan’, laakiin caleemaha geedka berdaha waxay billaabeen inay cagaarnaadaan.
Tani waa inay inaga dhigto mid taxaddar leh oo feejigan waqtigeena maadaama nebigu inooga digay taxaddar iyo dan la’aan ku saabsan soo laabashadiisa.
36 Laakiin maalintaas iyo saacaddaas ninna waxba kama oga, malaa’igaha jannada iyo Wiilka toona, midna ma oga, Aabbahay keliya maahee.
Matayos 24: 36-51
Isa al Masih wuxuu sii waday inuu Injil wax ku baro ku saabsan soo laabashadiisa iyo Isku xirku waa halkan.
Soo Koobidda Maalinta 3 iyo Maalinta 4aad
Waqtiga la cusbooneysiiyay wuxuu muujinayaa sida Ciise Masiix uu u habaaray geed berde ah Maalinta 3 – Talaadada – ka hor doodaha dhaadheer ee lala yeelanayo hoggaamiyeyaasha Yuhuudda. Ficilkani wuxuu si maldahan u ahaa sheegiddii Israa’iil. Kadib, Arbacadii, Maalintii 4aad, wuxuu sharaxay astaamaha soo laabashadiisa – kan ugu weyni waa mugdi dhammaan meydadka samada.
Calaamadaha Ciisa Masiix 3 iyo 4 ee wiigiisii ​​ugu dambeeyay marka la barbar dhigo qawaaniinta Towreed
Kadib wuxuu nooga digay dhamaanteen inaan si taxadar leh u ilaalino soo laabashadiisa. Maaddaama aan hadda arki karno geedka berdaha oo cagaar noqonaya, waa inaan si taxaddar leh oo taxaddar leh u noolaano..
Injilku wuxuu qorayaa sida shaydaan (Iblis) uga hor yimid nebiga maalintii 5aad, ayaan eegeeynaa oo noo xigta.
[i] Sharaxaadda maalin kasta usbuucaas, buugga Luukoos ayaa soo koobaya:
Author [email protected]Posted on 21/11/2020 06/03/2021 Categories Injiilka shaaca ka qaadayTags 82 surah, End of the World, Isa Al Masih returns, return of Isa Al Masih, Surah 77, Surah al-Infitar, Surah Al-Mursalat, Surah at-hair, Surah at-Takwir, verses 81Leave a comment on Maalmaha 3 & 4 – Ciise Masiix wuxuu sii saadaalinayaa mustaqbalka iyo Soo noqoshadiisa